राष्ट्रको अस्मिता नै नरहला कि भन्ने स्थिति आउला भनेर एकता गर्‍यौं : प्रचण्ड ! – मुलधार न्युज
Home > राजनीति > राष्ट्रको अस्मिता नै नरहला कि भन्ने स्थिति आउला भनेर एकता गर्‍यौं : प्रचण्ड !
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार २२:५६
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सरकार अबको ५ वर्षसम्म नढल्ने दावी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठनको १२ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा उनले कम्युनिष्टहरुको सुविधाजनक एकलौटी बहुमत रहेको सरकार कसैले चाहेर पनि नढल्ने बताएका हुन् ।
‘हामीले कम्युनिष्टहरुको निकै सुविधाजनक एकलौटी बहुमतको सरकार बनाएका छौं । यो सरकार कसैले हिलाएर हिल्दैन, ५ वर्षमा कम्तीमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार चल्छ’ उनले भनेका छन् ।
गएको वर्ष ७० वर्षमा नेपालीले ५ वर्ष एउटै सरकारले काम गरेको देख्न र कामको मुल्यांकनको आधारमा फैसला गर्ने अवसर नपाएको भन्दै प्रचण्डले त्यस्तो अवस्थाको आफूहरुले अन्त्य गरेको बताए ।
‘पञ्चायतमा राजाले टीका लगाउने सरकार पनि ३ वर्षभन्दा टिकेन, अनि बहुदल पछि हुन्छ कि भनेको झन् खराब स्थिति आयो । अब गणतन्त्र आएपछि धेरै राम्रो होला भनेको छ ९/९ महिनामा फेरिने झन् विकराल अवस्था देखिएपछि’ उनले भने ‘यो अवस्था ल्याउने राजनीतिक त्याग तपस्या र बलिदान गर्ने हामी जनता र नेतृत्वका लागि ठूलो चिन्ताको अवस्था रहृयो ।’
अब पनि यस्तै अवस्था रहेमा मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने र मुलुकको अस्मिता नै बचाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्ने भएकाले एकतामा गएको प्रचण्डले बताए ।
‘यस्तै फेरि पनि अर्को ७० वर्ष रहने हो भने अर्थतन्त्र डामाडोल हुन्छ, अर्थतन्त्र जति डामाडोल हुँदै जान्छ यो राष्ट्रको अस्मिता त्यति नै खतरामा पर्दै जान्छ र कुनै दिन यस्तो पनि आउन सक्छ नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता बचाउनै नसक्ने ठाउँमा पुग्ने खतरा छ । यही कुरालाई हेरेर हाम्रा उतार चढाव घु्म्ती मोडहरु र हाम्रा सबै संघर्षहरुको समीक्षा गरेर एकतामा आयौं’ प्रचण्डले भने ।
जनमत परिवर्तन र सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेको भन्दै उनले राजीनितक नेतृत्वले स्थिरता दिन नसक्दा जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बताए । ‘यो राष्ट्रले यो भन्दा बढी अराजकता झेल्न सक्दैन । यो भन्दा बढी भूमरी झेल्न सक्दैन’ उनले भने ‘अब जिम्मेवारी तपाई हाम्रो काँधमा आयो ।’
शीर्षक – पाँचखालमा खुल्लेआम बालुवा तस्कर !! स्थानियले गरे तालाबन्दी !!
डीआईजी बढुवाको तयारीः ११ डिआईजीका लागि २९ एसएसपीबीच धम्साधम्सी
चुडामणी शर्माकाे घर बिप्लप पार्टीद्वारा कब्जा
मुद्धा हारेपछि नुरप्रसाद अधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा वितण्डा मच्चाए
जुवाको पैसा लुकाएको आरोपमा प्रहरीमाथि कारवाहि
झापा हत्या प्रकरण : दुई युवक पक्राउ
‘पिजंडा ब्याक अगेन’ ट्रेलर सार्बजनिक